"ဆရာရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခံရမှု" ၉၂ခု။ Shizuoka စီရင်စု ပညာရေးကော်မတီက မူလတန်းနဲ့ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းသား/သူ ၁သိန်းခွဲကို စစ်တမ်းကောက်ခဲ့ပါတယ် - JAPO Japanese News
“ဆရာရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခံရမှု” ၉၂ခု။ Shizuoka စီရင်စု ပညာရေးကော်မတီက မူလတန်းနဲ့ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းသား/သူ ၁သိန်းခွဲကို စစ်တမ်းကောက်ခဲ့ပါတယ်
သော 27 May 2022, 17:39 ညနေ
ဆရာတွေရဲ့ နှုတ်ပိုင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းအရ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခံရမှု ခံခဲ့တယ်လို့ ခံစားရသူ ၉၂ ယောက်တောင်ရှိခဲ့ပါတယ်
စစ်တမ်းကို ၂၀၂၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ကနေ ၂၀၂၂ခုနှစ် မတ်လအတွင်း အစိုးရကျောင်း၊ စီရင်စုပိုင်ကျောင်း၊ အထူးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကျောင်းစတဲ့ ကျောင်းတွေက မူလတန်း ပဥ္စမနှစ်နဲ့ အထက်တန်း တတိယနှစ်ကျောင်းသား/သူ စုစုပေါင်း ၁သိန်း၅သောင်း ၆၃၀၆ ယောက်ကို ကောက်ခဲ့တာပါ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခံရမှု ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပြီးမှ ကလေးတွေကို စစ်တမ်းမေးခွန်းစာရွက်ကို အိမ်ယူသွားပြီး ဖြေခိုင်းခဲ့တာပါ
အဖြေစာရွက်တွေကိုလည်း ကျောင်းအုပ်ကိုယ်တိုင် ကြီးကျပ်ကောက်ယူခဲ့တာပါ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခံရမှု ခံခဲ့တယ်လို့ ခံစားရသူ ၉၂ ယောက်ရှိခဲ့ပြီး၊
အလယ်တန်း ကျောင်းသား/သူ ၄၆ ယောက်နဲ့ အများဆုံးဖြစ်ကာ၊
မူလတန်း ကျောင်းသား/သူ ၂၇ ယောက်၊
အထက်တန်း ကျောင်းသား/သူ ၂၁ ယောက်၊
အထူးပြုစုစောင့်ရှောက်ခံ ကျောင်းသား/သူ ၃ ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်
မလိုအပ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုင်တွယ်ခံရသူ ၅၅ ယောက်
မလိုအပ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ် ထိကပ်ခံရသူ၊ စိုက်ကြည့်ခံရသူ ၁၂ ယောက်
ဆိုပြီးတော့ 70% လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်
“club activity သင်ပြနေရင်း လက်မောင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားတာ”
“Gym မှာ မလိုအပ်ဘဲ ပုခုံးပေါ် စက္ကန့် ၄၀ လောက်ကြာအောင် လက်ကိုတင်ထားတာ”
“ခေါင်းငုံ့နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန် ရင်သားတွေကို စိုက်ကြည့်တာ”
တခြားမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်၊ လိင်၊ အသွင်အပြင် တို့နဲ့ပက်သက်ပြီး ပြောခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်
“ဝိတ်ချိန်နေတုန်း ကိုယ်အလေးချိန်ကို တခြားကျောင်းသားတွေကြားအောင် အော်ပြောတာ”
“ကျောင်းအပ်တဲ့အချိန် ဝလာတယ်‌နော် လို့အပြောခံရလို့ စိတ်ဒါဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်”
“အထူးပြုစုစောင့်ရှောက်ခံကလေးကို “chan” လို့နာမည်တပ်ခေါ်တာ” (သေးသိမ်စွာ ခံစားရစေပါတယ်)
“ယောကျ်ားလေးဖြစ်ပြီး ငိုမနေနဲ့လို့ အပြောခံရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်”
စီရင်စု ပညာရေးမှူးရုံးကတော့ “ရလာတဲ့ အဖြေတွေအရတော့ အတင်းအကျပ် အပြစ်ပေးလောက်စရာ သာဓကမျိုးတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် ခေတ်ဟောင်းက စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ကတော့ ကိုင်တွယ်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူး” လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ပညာရေးကော်မတီက အလားတူအဖြစ်မျိုး နောက်မဖြစ်ရအောင် ပြဿနာရှိနေတဲ့ ကျောင်းတွေက ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကို သင်ပြပေးပြီး၊ အမှားမလုပ်မိအောင် လမ်းညွှန်နေတဲ့အခြေအနေကို စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်
ကျောင်းသားတွေရဲ့ အဖြေမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို list တစ်ခုလုပ်ပြီး၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကို နေ့စဥ် အပြောအဆို၊ အပြုအမူတွေမှာ ပြင်ဆင်သင့်တာ ပြင်ဆင်ရအောင် မူဝါဒချမှတ်ထားပါတယ်
လှည့်စားရုပ်ပုံပန်းချီတွေနဲ့ “သိပ်သည်းမှု” ကို ကာကွယ်နိုင်မလား ?
ကိုရိုနာခေတ်မှာ အသစ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Drive in သရဲခြောက်တဲ့အိမ် !!!
(၇)ရက်နေ့၊ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ကူးစက်မှု ၅၀၅ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၅ ဦးရှိ !!